Epic Mitambo ichavhura yayo chaiyo chitoro chemitambo kukwikwidza neSteam | Linux Vakapindwa muropa
Epic Mitambo, anovandudza weFortnite uye iyo yakanyanya kushandiswa mutambo wekugadzira software Unreal Injini, Izvo zvakare zviri kuda kutanga kutengesa mitambo kubva kune mamwe makambani.
Munguva pfupi yapfuura Epic Mitambo yakazivisa pane yavo blog kuvhurwa kwechigadzirwa chitsva "Epic Games Chitoro", nekudaro kuvhura yakanangana nemukwikwidzi kune Steam iyo inochengetwa neValve.
Epic iri kuvhura chitoro chitsva chepamhepo senge Steam, iyo zvakare ichave neyechitatu-bato mitambo, zvichiratidza kumwe kutyisidzira kukuru kune iyo Steam chinzvimbo chakanyanya semutungamiri anotungamira wemazita ePC.
Iyo Epic Chitoro, kuvhura munguva pfupi, Ichatanga nenhamba yakasarudzwa yePc uye Mac mitambo, uye ichavhurira kune vamwe vanogadzira gore rinouya.
Sekureva kweMitambo yeEpic, chikuva chavo chichava chinobatsira zvakanyanya kune devs, chiziviso ichi chakaitwa nemuvambi weEpic Games Tim Sweeney.
1 Epic Mitambo inoda kuwedzera chitoro chayo
2 Epic Mitambo inoziva kuedza kwevakagadzira zvemukati
Epic Mitambo inoda kuwedzera chitoro chayo
Epic Mitambo ichavhura yayo chitoro kukwikwidza neSteam uye mutengi weLinux ari munzvimbo yekutarisisa.
Zvinoenderana naTim, Epic inoda kuendesa chitoro nemubairo wakanaka kune devs uye zvakare hukama hwakananga navo, nekudaro zvichiita kuti kutaurirana.
Mukutaura kwake akataura zvinotevera:
“Tichaparura Epic Games Store munguva pfupi uye tichatanga rwendo rurefu kufambisa basa revatambi vese.
Chitoro chichavhurwa neine suite yemitambo, iyo iyo nguva ichashanda paWindows neMac, ipapo ichavhurwa zvakanyanya kune mimwe mitambo uye yeApple uye mamwe mapuratifomu akavhurwa muna 2019. «
Imwe yemakadhi Epic 'makadhi ndeyekukwezva vanogadzira kuburikidza nerutivi rwemari yeplatifomu, ichipa chikamu chakakura cheizvo zvinopihwa neValve, kunyange kuchinja kune marongero, mairi anoti zvinotevera:
Epic Mitambo ichapa 88% kune vese vanogadzira avo vava kuda kushandisa chikuva chayo uye vasingabhadharise echinyakare 5% emitero kubva kuvashandisi veinjini yayo yemutambo.
Nokuenzanisa, chitoro cheValve's Steam chinotora pakati pe20 ne30 muzana yemari yemutambo..
Epic Games Store, iyo yakavhurika kumitambo yakagadzirwa pane chero injini yemitambo, ichave inowanikwa kuburikidza neEpic Games kuvhurwa uye pane imwe webhusaiti.
Epic Mitambo inoti chitoro chayo chichava chakavhurika kumitambo yakagadzirwa neinokwikwidza Unity injini uye zvimwe zvishandiso zve software.
Asi Epic ichiri kubatanidza ayo maturusi: Pamitambo yakagadzirwa neUnreal, Epic inoti ichabvisa mvumo yese kubva kuUnireal yekutengesa kunogadzirwa kuburikidza nechitoro.
"Sevagadziri, taida zvinhu zviviri: chitoro chine hunyanzvi hwehupfumi uye hukama hwakananga nevatambi," akadaro mushambadzi Tim Sweeney, muvambi weEpic Games, pawebhusaiti yekambani.
Epic Mitambo inoziva kuedza kwevakagadzira zvemukati
Epic urikushandisa chimwe chinhu chinonzi chirongwa cheRutsigiro-A-Musiki nechitoro, Sweeney akadaro.
Purogiramu inobatanidza vanogadzira pamwe ne10,000 + vagadziri vezvinhusenge YouTube vhidhiyo vagadziri uye Twitch inodzora.
Tsigiro-A-Musiki anokomborera vagadziri vekusimbisa mutambo wekuvandudza mutambo.
"Epic Mitambo 'Yekutsigira-A-Musiki chirongwa chakakosha pakubatsira vanogadzira kuunza zvigadzirwa zvavo kune vatambi.
Vanogadzira zvemukati vakadai seYouTube vhidhiyo vagadziri, vatambi vanoyerera mitambo yavo paTwitch, cosplayers, vagadziri venharaunda uye mabloggi vakave vanokanganisa mumitambo… - Yakapindura Tim Sweeney
Pakutanga, vagadziri vazhinji vaisabhadharwa nevatambi vemitambo yebasa ravo uye pachinzvimbo vaifanira kuvimba nezvipo.
Nokubatanidza vagadziri nevagadziri, iyo Epic Games Chitoro inoita kuti zvive nyore kune vatambi kuti vawane mitambo uye nekupa mubairo vagadziri vezviri mukati mekuedza kwavo
“Parizvino pane vanogadzira zvemukati vanopfuura zviuru gumi pachirongwa ichi, nemakumi emamiriyoni evateveri, uye huwandu uhu huri kukura zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Epic Mitambo ichavhura yayo chaiyo chitoro chemitambo kukwikwidza neSteam